Hampanambadiana Sinoa: tratra ireo mpianaka mpanondrana vehivavy mankany Chine | NewsMada
Natolotra ny fampanoavana, ny asabotsy teo ireo mpianaka (52 sy 34 taona) voarohirohy tamina raharaha fanondranana olona mankany Sina. Hitaiza zaza ny asa nifanarahana miala eto Madagasikara, hay hampanambadiana Sinoa rehefa tonga any an-toerana…
Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny Service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les frauds documentaires (SCESLFD) Anosy, ny 14 jona 2019 teo teny Sabotsy Namehana ireto mpianaka voarohirohy noho ny fanondranana vehivavy mankany Chine. Araka ny fanazavan’ny polisy, nisy ray aman-drenina tovovavy nametraka fitoriana tao amin’ny SCESLFD Anosy, momba ny zanany vavy nalefa hiasa any Chine, ny taona 2017. Tamin’ity taona 2019 ity, nifandray tamin’ny telefaonina niresaka tamin’ireo ray aman-dreniny io zanany vavy io ary nitaraina fa mijaly tanteraka izy. Ny antony mampijaly azy dia tsy araka ny resaka nifanarahana ny nialany teto Madagasikara, ny taona 2017, ny asa ataony any an-toerana. Voalaza fa hoe hitaiza zaza no nifanarahan’izy ireo talohan’ny niaingana ary mikarama 1 200 000 Ar isam-bolana, kanjo nony tonga tany an-toerana dia nogiazan’ireo Malagasy mpiray tsikombakomba amin’izy mianaka sy teratany sinoa mipetraka ao Chine ary nalainy avy hatrany ny pasipaoro sy ny kara-panondrony. Nampanambadiana lehilahy sinoa avy hatrany izy rehefa tonga tany Chine.
Efa nahazoana 2 tapitrisa Ar…
Fantatra nandritra ny fanadihadian’ny polisy hatrany fa misy vehivavy malagasy mipetraka any Chine ka izy no mampitady tovovavy ny reniny sy ny rahavaviny mipetraka eto Madagasikara. Ireto olona ireto indray avy eo no nahitana ilay vehivavy nalefa izay nolazaina fa hitaiza zaza, ny taona 2017 teo, izay tsy mbola tafaverina hatramin’izao. taorian’ny fandraisana andraikitra nataon’ny polisy miasa ao amin’ny SCESLFD Anosy dia voasambotra teny Sabotsy Namehana, ny zoma maraina teo, izy mianaka tompon’antoka tamin’ny fandefasana ilay vehivavy. Nambaran’ny polisy hatrany fa ny volana mey lasa teo dia efa saika nandefa tovovavy iray hafa indray izy mianaka ireto izay nahazoan’izy ireo vola 2 tapitrisa Ar hikarakarana ny antontan-taratasy. Efa noraran’ny fanjakana ity resaka fandefasana olona mankany ivelany ity. Misy ihany anefa ireo mahita hirika sy/na lalana ambanin’ny tany na ireo mpanondrana na ireo olona aondrana. Vao haingana ny filoha Rajoelina no nampody ireo vehivavy niharan’ny herisetra niasa tany amin’ny tany Arabo. Izao anefa, efa iharan’ny herisetra any amin’ny tany hiasany any ivelany ireo tovovavy sasany vao fantatra hoe hay ve ka mbola mitohy ihany ity raharaha fanondranana tovovavy hiasa any ivelany ity e! Manjaka ny kolikoly sy ny gaboraraka? Efa fantatra izany izao fa misy tambajotra goavana amin’ity raharaha ity ao Chine. Aiza ny tompon’andraikitra amin’izany?